Afti loo qaadayo dastuurka Masar maanta - BBC Somali - Warar
Afti loo qaadayo dastuurka Masar maanta
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 December, 2012, 12:59 GMT 15:59 SGA
Codbixinta aftida dastuurka.
Dad badan ayaa u soo baxay codaynta wareeegii koowaad afti loo qaadayo dastuurka cusub ee qabyada ee Masar. Aftida ayaa kala qaybisay wadanka dhalisayna banaanbaxyo rabshado leh.
Boqol iyo labaatan kun oo askari ayaa la dhigay goobaha codaynta ee Qaahira, Alexandaria iyo siddeed gobol oo kale.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay, laakiin xaalada way degan tahay.
Dastuurka qabyada ah ayaa waxaa taageersan madaxweyne Morsi iyo xisbigiisa Akhwaan Muslimiin, laakiin mucaaradka ayaa ka soo horjeeda oo sheegay in Islaamiyiinta ay si deg deg ah u sameeyeen iyo inaysan ilaalinayn xuquuqda dadka.